Faaiidada khudrada – Biyacade
October 6, 2016 October 6, 2016 biyacade
Shariif adow sheikh
Waa sheeyga ugu wanaagsan ee aadmiga kanhelo caafimaadka.
<front colar=”red”>khudaarta </front> waa sheey eebbe u dhameeys tiray dhanka fitimiinaatka, malaha cayil iyo dufan muuqata, malaha laaab jeex ana lahan dhiikar iyo sokor.
Soomaalida kuwooda qurbaha u qaxay waxaa soo wajahday xaalad caafimaad darro sababtuna waxeey tahay cimila aan aheeyn tii soomaaliya oo soo wajahday ha noqoto qabow ama dhulka lagu soconaya; taana waxaa u sii dheereeyd raashin la keydiyay oo ay cunaan ama aan aheyn mid sidii eebe usoo aaaray ah.
Si kastaba waxaa soomaalida lagu la talinayaa in ay badsadaan khudaarta nuucyadeeda kala duwan, sida
Geedka soomalida u yaqaan seytuunka.
Moos iyo liin dhanaanta. Iwm.
Previous deeqsan cabdulaahi maxamad
Next Maqaal haweeneeyda ninkeeda caasiaa